स्मार्ट वक्ताहरु: एक क्रेता गाइड - समाचार नियम
स्मार्ट वक्ताहरु: एक क्रेता गाइड
रोशनी खोल्दै आफ्नो मनपर्ने धुनहरू प्ले तिनीहरूले सबै केहि गर्न सक्छन्. तर तपाईं जो प्राप्त गर्नुपर्छ? हामी चार अग्रणी मोडेल परीक्षण
शीर्षक यो लेख “स्मार्ट वक्ता: एक खरीदार गाइड” शमूएल गिब्स द्वारा लेखिएको थियो, आइतबार 25 फेब्रुअरी मा ओब्जर्वर लागि 2018 09.30 UTC
मूल्य: £ 89,99अमेजन दोस्रो-पुस्ता इको मा स्मार्ट वक्ता सम्पूर्ण वर्ग आविष्कार कि उपकरण एक पुनर्निर्मित संस्करण हो 2014. नयाँ इको सानो छ, राम्रो लग र राम्रो देख, कपडा वा काठ finishes को एक विकल्प मा.
के इको ठूलो बनाउँछ अमेजन गरेको भर्चुअल सहायक छ, alexa. शीर्ष मा सात माइक्रोफोन को घन्टी को आफ्नो रुचि लागि बाहिर सुन्नुहुन्छ जागा शब्द - पूर्वनिर्धारित बस छ "Alexa" - व्याख्या लागि अमेजन सर्भरहरू गर्न तपाईं के भन्न पठाउनु अघि. Alexa लगभग सधैं तपाईंले एउटा संडसी प्रशंसक रूपमा चर्को र राम्रो टाढा संगीत हल्ला सहित सुन्न सक्नुहुन्छ.
Alexa बहु-प्रयोगकर्ता समर्थन छ, प्रश्न एकदम धेरै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ व्याख्या मा उत्कृष्ट छ र यो प्लग गर्न सकिन्छ भनेर निर्मित प्रतिभा र तेस्रो-पक्ष कौशल को एक बहुतायत छ, यो सबैभन्दा गोलाकार आवाज सहायक उपलब्ध. यसलाई विशेष स्मार्ट घर नियन्त्रण र संगीत प्लेब्याक मा excels, Spotify पूर्ण आवाज नियन्त्रण संग, अमेजन संगीत र TuneIn.
नयाँ इको पनि पुरानो एक भन्दा राम्रो सुनिन्छ, थप बास र स्पष्टता साथ, विशेष उच्च मात्रा मा. जबकि यो गुच्छा मा सबै भन्दा राम्रो छैन, यो पक्कै पनि मूल्य लागि आफ्नो वजन माथि पंचहरु, एकल 2.5in woofer र 0.6in tweeter यसका 360 डिग्री अडियो कोठा भर्न सक्षम. यो पनि गर्न वा इको देखि वक्ता र स्ट्रिमिङ संगीत जडान लागि अडियो बाहिर पोर्ट र ब्लूटूथ छ.
अमेजन गरेको Alexa अनुप्रयोग धेरै सक्षम छ, यदि एक सानो सुस्त, बनाउने यसलाई सेट र परिवर्तन कुराहरू सजिलो. मात्रा लागि शीर्ष मा बटन, कार्य बटन र म्युट बटन देखाउँछ कि शीर्ष वरिपरि हल्का घन्टी द्वारा complemented छन् Alexa के गरिरहेको छ र तपाईं बोल्ने हुनुहुन्छ जहाँ इको सोच्छ. को mics मौन र घन्टी रातो glows, जो कोठा मार्फत हेर्न सजिलो छ.
फैसला: £ 90 मा, यो इको पिट्न गाह्रो छ, Alexa यो सबै भन्दा राम्रो मूल्य सर्वांगीण स्मार्ट वक्ता बनाउने साथ.
एप्पल HomePod: प्रभावशाली आवाज गुणस्तर. तस्वीर: एन्टोनियो Olmos
मूल्य: £ 319 नयाँ प्रवेश एप्पल गरेको HomePod र छ, यो संग, को iPhone-निर्माता अन्तमा पार्टी सामेल छ भन्दा तीन वर्ष पहिलो इको बजार मारा पछि. को HomePod समूह मा सबै भन्दा ठूलो र सबै भन्दा महंगा स्मार्ट वक्ता छ, एक सपाट सिलिकन तल र चमकदार एक जाल-ढाकिएको सिलेंडर, शीर्ष मा स्पर्श संवेदनशील डिस्क.
ठूलो हुनुको बावजुद, यो गुच्छा सबैभन्दा unassuming छ र भान्सा तालिका बीचमा घरमा रूपमा छ यो एक mantelpiece वा किताब दराज छ रूपमा. चेतावनी दिएको छ, हुनत: को सिलिकन खुट्टा उपचार काठ मा सेतो घन्टी चिह्न छोड्न हुनेछ. शीर्ष दुई लुकेका मात्रा बटन र एक केन्द्र multicolour प्रदर्शन गर्दा देखाउँछ कि छ सिरी, स्याउ आवाज सहायक, तपाईं सुनिरहेको छ. यो कोठा मार्फत हेर्न सजिलो छैन र गर्दा माइक्रोफोन मौन सक्छ, त्यहाँ HomePod कुनै पनि थप सुनिरहेको छैन कि कुनै देखिने संकेत हो.
को HomePod यकीनन गुच्छा मा सबै भन्दा राम्रो-लग वक्ता छ. यो सात tweeters र एकल वक्ता देखि फेला पार्न चाहाने सबैभन्दा अथाह soundscape सिर्जना एउटा woofer को एरे छ. स्वतः यसको वरपर गर्न मिलाउँछ, एक लुक्न अनुभव सिर्जना कुनै कुरा जहाँ यो कोठा मा राखिएको गर्नुपर्छ, गहिरो तर कस नियन्त्रण बास र उत्कृष्ट अलग संग, केही अर्थ नष्ट हुन्छ, पनि crescendo मा.
जबकि यो राम्रो सुनिन्छ, स्याउ गरेको सिरी अझै गुगलको सहायक वा अमेजन गरेको Alexa जस्तै मानक गर्न छैन. तिनीहरूलाई को सबै भन्दा राम्रो रूपमा साथै तपाईं सुन्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं बुझ्न फरक कुरा हो. सिरी तपाईं वरिपरि भन्न खोज्नुभएको के हुन्छ 70% समयको, जो अत्यन्तै निराश बनाउन सक्छ, प्रश्न कार्यहरू जवाफ र प्रदर्शन गर्न आफ्नो क्षमता जस्तै राम्रो छैन, जबकि. कुनै बहु-प्रयोगकर्ता खाता समर्थन छ, या त, जो यो एक परिवार घरमा संग मा प्राप्त गर्न कम सजिलो छ मतलब.
को HomePod पनि केवल एप्पल संगीत वा iTunes मिलान, कुनै देशी Spotify वा बीट्स परे रेडियो अर्थ 1. संगीत एउटा iOS उपकरणबाट AirPlay मार्फत यसलाई पठाइएको गर्न सकिन्छ, म्याक वा PC मा iTunes, तर Android उपकरणहरू बाहिर छन् र त्यहाँ कुनै ब्लुटुथ वा समर्थन लाइन मा छ. एक आधुनिक iOS उपकरण पनि HomePod सेट अप गर्न आवश्यक छ, यसलाई अर्थ सबै-एप्पल प्रयोगकर्ताहरूको लागि केवल.
फैसला: यसलाई सुनिन्छ ठूलो तर सिरी, जडान र संगीत सेवा समर्थन प्रतियोगिता पछि तरिका हो.
गुगल घर: 'सहायक बाहिर काम गर्न अनुरोध गर्न खोज्नु के गर्न सक्षम हुनेछ, जहाँ अरूलाई असफल। ' तस्वीर: एन्टोनियो Olmos
मूल्य: £ 129 गुगलको होम स्मार्ट वक्ता सानो छ, अरु को भन्दा भन्दा chubbier उपकरण. यसको सट्टा इको वा HomePod जस्तै सिलेंडर हुनुको, गृह देखिन्छ सेतो संग एक फूलदान जस्तै, नरम स्पर्श, सेतो प्लास्टिक शीर्ष र कपडा आधार (एकल वक्ता र दुई निष्क्रिय radiators लुकाउने).
शीर्ष प्यानल सम्पूर्ण स्पर्श संवेदनशील छ. गुगल सहायक सक्रिय र मात्रा समायोजन गर्न परिपत्र गति मा आफ्नो औंला स्वाइप गर्न केन्द्र ट्याप गर्नुहोस्. पछाडि एक बटन माइक्रोफोन mutes. शीर्ष सतह मुनि लुकेको एल ई डी को घन्टी छ, जो के भइरहेको छ तपाईंलाई देखाउन प्रकाश, को mics मौन हुँदा सहायक प्रतिक्रिया वा माथि पहेंलो प्रकाश गर्दा circling ढाँचाको बनाउने.
गुगल घर सहायक राम्रो तरिकाले तपाईं सुन्न सक्षम कि ​​शीर्ष दुई mics छ, सबै भन्दा हल्ला र संगीत भन्दा, तर एकदम छैन साथै इको. सहायक अमेजन गरेको Alexa गर्न कौशल को समान सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक भाषा उपलब्ध पहिचान संग सेट छ - यदि तपाईं गडबड तपाईँको प्रश्न, सहायक सामान्यतया बाहिर काम गर्न अनुरोध गर्न खोज्नु के गर्न सक्षम हुनेछ, जहाँ अरूलाई असफल. यो पनि बहु-प्रयोगकर्ता समर्थन छ, विभिन्न आवाज चिन्न र बनाउन सजिलो आफ्नो पुस्तकालयमा वा जानकारी तपाईंको पात्रो देखि संगीत प्राप्त गर्न.
सहायक भन्दा ठूलो जानकारी डेटाबेस छ, यो सामान्य ज्ञान मा बाँकी भन्दा राम्रो बनाउन, फिर्ता झर्ने थप जानकारीको लागि वेबमा, तर यसको तेस्रो-पक्ष अनुप्रयोगहरू र स्मार्ट घर नियन्त्रण Alexa पछि थोडा LAG.
गृह ध्वनि को इको भन्दा बढी प्रत्यक्ष छ, अगाडि बाहिर निकाल. यसलाई बास को एक अपेक्षाकृत ठूलो रकम छ र राम्रो एउटा सानो स्पिकर लागि ठूलो प्राप्त गर्न सक्छन्, तर इको भन्दा कम स्पष्ट छ. कुनै ब्लुटुथ वा एनालग सकेट बाहिर छ, तर यो natively Spotify संगीत प्ले गर्न सक्नुहुन्छ वा गुगल प्ले संगीत वा ब्लुटुथ वा Google कास्ट मार्फत संगीत प्राप्त.
फैसला: गुगल सहायक गरेको समझ र जानकारी पहुँच अनुपम छन् तर मुख्य पृष्ठ इको भन्दा अधिक महंगा छ.
को Sonos एक: बोर्ड र लगभग हरेक संगीत सेवा उपलब्ध मा alexa. तस्वीर: एन्टोनियो Olmos
मूल्य: £ 199 को Sonos एक सबै ट्रेडों को ज्याक हुन प्रतिज्ञा. Sonos ठूलो लिए खेल्नु:1 किताब दराज वक्ता, मात्रा र प्लेब्याक लागि बटन संग एक स्पर्श संवेदनशील शीर्ष थपियो र शीर्ष मा एक छ-माइक एरे लागि प्वालहरू भएको यो Perforated. जस्तै, एक तालिका को केन्द्र मा भन्दा एक किताब दराज मा घर मा थप वा यस्तै छ, सबै निर्देशनहरू यसको एकल woofer र tweeter अनुहार projecting ध्वनि फर्वाडहरु भन्दा रूपमा.
यस समूहमा अन्य वक्ता कुनै पनि विपरीत, एक एक भन्दा बढी आवाज सहायक समर्थन गर्न सम्भावित छ. अहिले, यो अमेजन गरेको Alexa आउँछ, तर कम्पनी पनि गुगल सहायक एकीकरण मा काम गरिरहेको छ.
यो राम्रो तरिकाले तपाईं सुन्न र शीर्ष दुई एल ई डी छ सक्छन्. एक हुँदा Alexa काम छ mics छन् र अन्य चमक कि संकेत. बाँकी विपरीत, एक पनि बीप बनाउँछ Alexa को जागा शब्द सुनेर, यो सजिलो कुरा सुनेर कि कोठा मार्फत बताउन बनाउने. एक Alexa गरेको कार्यक्षमता को सबै भन्दा समर्थन, सबै कौशल सहित, स्मार्ट घर नियन्त्रण र सहायक सुविधाहरू, प्लस Spotify पूर्ण नियन्त्रण आवाज, अमेजन संगीत र TuneIn, तर आवाज कल र ई-बुक प्लेब्याक अभाव.
पनि बाँकी विपरीत, एक बिना Alexa वाइफाइ वक्ता रूपमा परिचालन पूर्णतया सक्षम छ. को Sonos अनुप्रयोग सूर्य अन्तर्गत लगभग हरेक संगीत सेवा एकीकृत, सहित एप्पल संगीत, एक खोज स्थान मा, वा तपाईंले Spotify जडान संगीत बजाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. कुनै ब्लुटुथ वा एनालग अडियो समर्थन छ, हुनत. तपाईं पनि अनुप्रयोगमा तपाईँको लिङ्कमा ध्वनि tweak र Sonos कोठा लागि ध्वनि अनुकूलन गर्न एक iOS यन्त्र प्रयोग Trueplay मिलाउने भनिएको के गर्न सक्छ.
एक व्यक्ति वक्ता रूपमा ठूलो सुनिन्छ, तर पनि एक स्टीरियो जोडी राम्रो सुनिन्छ, र बहु-कोठा अडियो लागि पुरानो Sonos वक्ता कुनै पनि एक साथ लिङ्क गर्न सकिँदैन.
फैसला: Alexa यो उत्कृष्ट-लग वक्ता पिट्न एक कठिन कम्बो छ.
18296	10 Alexa, Google घर, पोर्टेबल, स्मार्ट वक्ता, स्मार्ट वक्ता
← स्याउ HomePod अन्तमा उपलब्ध खरिद गर्न सैमसंग ग्यालेक्सी S9 + समीक्षा →
सेप्टेम्बर 9, 2019
सैमसंग ग्यालेक्सी S10 5g समीक्षा